Lenovo Z5 Pro GT mechara nata gam akporo 10 | Gam akporosis
Snapdragon 855 bụ chipset kachasị elu nke 2019 nke ekwuputara na njedebe nke 2018. Nke a agbanweela site na ụdị ya Plus, nke bụ nsonaazụ nke overclocking, na ugbu a site na Snapdragon 865, nke kachasị ike Qualcomm ugbu a.
E weputara SD855 site na Lenovo Z5 ProGT, ọkọlọtọ flagship nke onye nrụpụta China nke oge ahụ nke pụtara n'ahịa na ngwụcha Disemba 2018. Na mbido ya, ekwuputara ya na Android achịcha na, ọ bụ ezie gam akporo 10 Ọ bịarutere na Septemba nke afọ gara aga ma ọtụtụ igwe na-egbu ya, ọ bụghị ruo ugbu a na ọ malitelarị iru smartphone a.
Gam akporo 10 mmelite na-abia Lenovo Z5 Pro GT
Ngwunye ngwa ngwa ọhụrụ maka ngwaọrụ ahụ biara na nọmba ZUI bu 11.5.223 wee tụọ 1.80 GB, ya mere nke a bụ mmelite buru ibu. Ugbu a, a na-enye ya naanị na China, mana enwere nkwa na ọ ga-agbasa n'ụwa niile, agbanyeghị na a ga-eji nwayọọ nwayọọ hapụ ya.
OTA na - abawanye ụdị Skin Skin nke ụlọ ọrụ na 11.5.223 ma weta ụyọkọ mgbanwe ọhụrụ, na mgbakwunye na ndị na-abịa na gam akporo 10 dị ka ọnọdụ zuru oke zuru oke.
Mmelite mgbanwe gbanwere site na Chinese bụ ndị a:
10dị XNUMX na-abịa!
Ebuli na usoro interface ihuenyo.
Mmelite njikwa ngwa ngwa.
Na-ebuli ọrụ mmezi olu.
Na-ebuli ọrụ ijide ihuenyo nke usoro.
Agbakwunyere wijetị kalenda ọhụrụ 2.
Agbakwunyere wijetị ihu igwe ọhụrụ 2.
Agbakwunyere isiokwu mara mma nke China.
Hazie iji kwado fuzzy search.
Obere windo zara ọrụ agbakwunyere.
Idozi misidentification nke oge ufodu mkpisiaka Kpọghe.
Mee ka ikike nchekwa abalị na ikike mgbanwe ike na-adịghị mma.
A na-agbakwunye Lenovo Lenovo ọhụrụ, na-eme ka njikọ PC PC dịkwuo mfe.
Versiondị ọhụrụ nke Music Voice na-akwado bọtịnụ ike iji teta.
Ntinye aka nyocha ọhụụ nwere ọgụgụ isi, enwere ike ịmata ọnọdụ netwọkụ ozugbo.
Na-ebuli ọrụ nlekọta ahụike U na mgbakwunye na ndakọrịta ngwaọrụ.
Lenovo Wallet tinyere ọrụ nke ịmegharị kaadị njikwa nnweta.
Enwere ọtụtụ njikarịcha usoro ị na-eche ka ị chọpụta.
Mara (na ofu) mbipụta
N'ihi ihe ndị ọzọ, ewepụla ọkachamara ọkachamara na-acha uhie uhie.
Ndozi ọrụ laabu, wepu nkata / edemede interface na igbe anwansi.
Akwụghị ụgwọ nchekwa na Voice Distributed na Android 10 mbipute, a ga-ewepụ ngwa ndị gara aga mgbe melite sistemụ.
N'ihi nsogbu imekọ ihe ọnụ, Lenovo Wallet gbanwere usoro mmeghe kaadị na mpaghara Beijing-Tianjin-Hebei, a gaghị emetụta kaadị ụgbọ ala na-emepe emepe.
Appsfọdụ ngwa ndị ọzọ amabeghị aka na sistemu gam akporo 10, enwere ike ịmalite mbido ma ọ bụ ọrụ ndị na-adịghị mma.
N'ihi ntọala gam akporo gam akporo 10, ikikere ngwa ọ bụlaEnwere ike nkwarụ akụkụ atọ, jiri aka mepee ikikere kwekọrọ.
Na-eme nyocha nke ogo nke Lenovo Z5 Pro, anyị achọpụta na o nwere ihuenyo teknụzụ Super AMOLED nke anụ ọhịa 6.39 nke anụ ọhịa nwere mkpebi FullHD + nke pikselụ 2,340 x 1,080, ihe ekwuru na mbụ Qualcomm SD855 processor, 6/8 / 12 GB na an oghere dị n'ime nke 128/256/512 GB. Batrị nke na - eme ka ihe niile dị ike bụ 3,350 mAh ma ọ na - abịa site na nkwado maka teknụzụ na - ebu ngwa ngwa 18-watt
Maka foto, ngwaọrụ ahụ na-etinye igwefoto azụ abụọ + 24 + 16 MP na onye na-agba n'ihu n'ihu nke na-etu ọnụ mkpebi 16 + 8 MP ma bụrụkwa nke modul nwere ike idobe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Lenovo Z5 Pro GT, ekwentị izizi nke ụwa nwere Snapdragon 855, mechara nweta gam akporo 10